Ilaa hadda, marka loo eego inta jeer ee cabsida bini'aadamka ah, waxaa la go'aaminayaa in cabsida biyuhu ay tahay cabsi dhab ah. Cabsida guud waa xitaa laba magacyo: aquafobia ama hydrophobia waa cabsida biyaha iyo dabaasha.
Iyadoo lagu saleynayo nooca asalka iyo muuqaalka cabsida biyaha, waa cadahay cabsidan, iyo sidoo kale cabsida dhererka, waxa loola jeedaa kan ugu caansan oo la fahmi karo. Dhamaantiis, waa dabiici ah waxayna leedahay arrin cad oo dhacdooyin ah. Magaal ahaan: dareenka is-ilaalinta . Sidaa darteed, waxaa lagama maarmaan ah in lagu daaweeyo daryeel iyo xitaa mahadnaq. Haddii sida noocan ah ee jirkeena, gaar ahaan - maskaxda, ma ahayn, ka dibna waxaa jiri lahaa shilal badan oo la xiriira biyaha! Laakiin waxaa jira xaalado aan macquul ahayn in la kontoroolo naftaada iyo cabsidaada. Tani waxay abuureysaa dhib badan iyo dhibaatooyin. Tusaale ahaan, marka qofku ogaado in uu si ba'an uga cabsanayo biyaha, qoto dheer iyo wax walba oo la xiriira biyaha - wuxuu dareensan yahay welwel iyo walwal la'aan. Xaaladahaas oo kale, way adagtahay in la raaxaysto oo lagu ciyaaro isboortiga biyaha.
Cabsida biyaha ee carruurta
Cabsida biyaha ee carruurta waxay ka badan tahay dadka waaweyn. Waxaa loo aaneynayaa calaamadaha neurotic. Ku ogow da'da 4-5 sano. Qandhadu waa calaamado aan caadi aheyn, waxay qaadan kartaa 3-4 sano oo kale. Waalidiinta si tartiib-tartiib ah ayey u bilaabaan inay dib u xusuustaan ​​waxa ka dhigi kara dhiirigelinta horumarinta cabsigan ilmaha. Hase yeeshee, inta badan, lama ogaan karo, maadaama aysan ku jirin. Afar sano waa da'da ilmaha, marka cabsida oo dhan ay bilaabato inay si dhakhso ah u korodho, cawaaqib aan fududayn ilmaha iyo waalidiintiisa. Taasi waa xitaa kan ugu yar, fikraddaada, dareenka xun wuxuu ku dhici karaa cabsi dhab ah oo joogto ah.
Fikradaha dadka maskaxda ku jira waxay karkarinayaan xaqiiqda ah in biyaha uu yahay shakhsi ahaanshaha. Maahan wax maanta maanta jira oo muujinaya "dareen xoog badan" iyo "dareenka dareenka."
Sidee looga gudbi karaa cabsida biyaha?
Waxaa jira hal hab oo kaliya oo looga hortagi karo cabsida biyaha. Tani waa auto - soo jeedin . Naftaada iska ilaali inaad joojiso baqdinta biyaha. Naftaada ku dhiiri geli in biyuhu aanay ka cabsanayn, taas, xaqiiqda, ma jirto wax khatar ah oo aad u dhibto. Bilaabidda miyir-qabka, oo ku dhamaata miyir-qabka, tartiib tartiib ah ama maalin maalmaha ka mid ah jidhkaaga ayaa hubaal geli doona biyaha mana jiro fikrado wax-yeeli kara naftaada nabadda. Laakiin tani waxay qaadan kartaa wakhti badan oo ka shaqeysa naftaada. Marka hore, is-faham naftaada, fahamka sababaha dhaqan ahaan. Ka dib, u sharax naftaada oo burburiya khuraafaadkaaga khiyaaliga ah.
Haddii uu si lama filaan ah ilmahaagu uga baqdo biyo
Ma jiro wax lagama maarmaan ah in lagu kufsado isaga oo isku dayaya inuu jiido biyaha. Waa in aad ku shubtaa biyaha waraabinta, laakiin ha ku jirin biyo, laakiin waxaad ku istaagtaa xeebta.
Ku maydho oo madaxa biyaha ka waraabi waraabinta.
Guriga, waxaad qabanqaabin kartaa xiiso, laakiin ciyaaraha iyo tababarka. Si aad u bilawdid, isku dhufo midba midka kale, ha iska joojiyo in uu ka baqo xoqdo.
Tusaale ahaan, bar ilmahaaga in aanad ka baqin inaad biyo u hesho wajiga iyadoo xaqiiqda ah in aad hawada qabatid oo hoos u dhig biyahaaga hoostooda. Sii ilmaha si uu u fahmo in biyaha uu wejigiisu - uusan ahayn mid cabsi leh, in uu leeyahay hawo ku filan oo uusan dabooli doonin.
Su'aalaha udiyaar garowga xirfadda
Faa'iido - maxay tahay, noocyadiisa, sida loo kala sooco jacaylka jacaylka?
Maskaxda bani'aadamnimada iyo farsamada
Leyliska "Maqnaashaha" hoggaamiyaha
Cudurka shakhsiyadeed ee Schizoid
Isku day in aad iska joojiso
Sifooyinka xun xun
Niyad jabka maskaxda
Muuqaal aad u muuqda
Sidee looga hortagaa xaasidnimada?
Hilibka hilibka si dhaqso ah iyo dhadhan fiican leh
Cawska cawska cagaaran xagaaga
Sariirta sariirta ee dhalinyarada
Maxaa Vanga ku riyooday?
Kylie Minogue ka dib arooska ayaa qaadan doonta magaca qoyska ninkeeda
Kiiska qalinka dibadda ee musqusha
Hygroma macnaheed - daaweynta qaliin la'aan
Kabaha laga soo saaro shinbiraha
Hilibka sharku - wanaagsan iyo xun
Maxaa la cuni karaa casho leh nafaqo habboon?
Hypoxia ee uurjiifka - calaamadaha iyo cawaaqibka
Muffins ka yimaada beerka digaaga
Victoria Beckham oo ku taal New York: David Beckham wuxuu u yimid inuu taageero xaaskiisa
Sawirrada caleemaha sawirada wadada
Cuntada - Khariidad
Jimicsiyada leh qayb adag
Suugada strawberry - macdanta kalooriga
Caabuqa haweenka uurka leh
Kate Bosworth iyo Alexander Skarsgard
Qabashada caruurta jiilaalka